Hay'adda Caafimadka Adduunka ee WHO ayaa arbacadi ka digaty cudurka safmarka ee coronavirus ay wakhti dheer qaadaneyso si ay dunida uga lug baxdo iyada oo ay waddama badabn diiwaan geliyeen kiisaska cusub ee maalinlaha ee ugu badnaa.
Hay'adda WHO waxay sheegtay 24-kii saac ee ugu dambeeyey in dunida laga diiwaan geliyey 106,000 oo kiis oo cusub.
Agaasimaha Guud ee Hay'adda Caafimadka Adduunka ee WHO Dr Tewedros Adhanom Gabreyesus ayaa walaac ka muujiyey kiisaska cusub ee soo kordhay iyo waddamada dhaqaalahooda uu dhexdhexaadka yahay ama uu hooseeya sida uu cudurkan safmarka uu u saameyn karo.
"Hay'adda WHO waxay sheegtay 24-kii saac ee ugu dameeyey in dunida laga diiwan geliyey 106,000 oo kiisas cusub, tani iyo marka uu cudurka dunida ka dillaacay waa tiradi maalinlaha ee ugu badneed oo la diiwaangeliyo," ayuu yiri Dr Tewedros Adhanom oo arbacadi shir jaraa'id qabtay.
"Ku dhawaad seddex meelood laba ka mid ah kiisaskaasi waxaa laga diiwaangeliyey afar dal oo keli ah," ayuu sii raaciyey.
Muddo intee la eg ayay igu qaadan kartaa inaan ka bogsado Coronavirus?
Trump oo ku faanay in dalkiisu uu hoggaaminayo caalamka tirada kiisaska Corona
Image captionDr Tewedros wuxuu sheegay WHO iney ka go'an tahay iney dib u eegis ku sameyso hab ay u maareysay cudurkan safmarka
"Heerka ay hadda xaaladdu mareyso chloroquine, hydroxychloroquine iyo dawo kale midna oo lagu daweeyo faayraska corona inaan la helin, arrintaasina waxay keeneysaa iney xakameynta cudurka marin habaabiso," ayuu yiri Dr Ryan.
Mr Trump wuxuu marar badan "wax tarka ay dawadan u leedahay coronavirus" ku sheegay shirarka jaraa'id ee uu ku qabanayay Aqalka Cad, wuxuuna yiri: "Maxay kaa dhibeysaa? isticmaal."
"Waxaan u baahan nahay tijaabooyin caafimaad oo waaweyn si aan cabir sax ah ugu sameyno saameynta ka imaan karta," ayuu yiri Kome Gbinigie, oo ah qoraaga daraasadaha ku saabsan Covid-19 ee Jaamacadda Oxford.
Dabayaaqadii March, laanta maamulka cuntada iyo dawooyinka ee Mareykanka (FDA) waxay fasaxday "in si deg deg ah loo isticmaali karo" marka lagula tacaalayo qaar ka mid ah bukaannada ay xaaladdoodu aadka u liidato ee la geeyo qaar ka mid ah isbitaallada.
Faransiiska ayaa u oggolaaday dhakhaatiirtiisa inay u adeegsadaan bukaannada qaba Covid-19, laakiin hay'adda kormeerka dawooyinka ee dalkaas ayaa ka digtay saameynta ka dhalan karta.